Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/tsiny.mg.n
Ohabolana 3695 Mandihy be volon-kelika : mahay manan-tsiny , tsy mahay manampondro . [Cousins 1871 #1588]
Ohabolana 4524 Mizara be mahahendry , mizara kely maha-adala (ahazoana tsiny ). [Rinara 1974 #2531]
Ohabolana 4600 Mpanao soa am-po ka ihandronan' ny tsiny . [Rinara 1974 #166]
Ohabolana 7754 Tsy misy mahita kilema momba tena . [Houlder 1895 #136, Cousins 1871]
Ohabolana 7864 Tsy rafozana toa bohaka . [Veyrières 1913 #1481]
Ohabolana 7942 Vady ananan-doloha , adidy hananana tsiny . [Rinara 1974 #310]
Ohabolana 8136 Vehivavy tsara tarehy petaka orona : voantondro iray monja no tsininy . [Veyrières 1913 #1794, Cousins 1871 #3656]